माग्ने बुढाले बिच सडकमा बर्षा राउतको सल ताने पछि भयो यस्तो बवाल (भिडियो हेर्नुहोस्) – नेपाली संगसार
माग्ने बुढाले बिच सडकमा बर्षा राउतको सल ताने पछि भयो यस्तो बवाल (भिडियो हेर्नुहोस्)
नेपाली संगसार calendar_today १ बैशाख २०७८, 4:19 pm
नेपाली टेलिचलचित्रमा माग्ने बुढाको पहिचान बनाएका केदार घिमिरेले बिच सडकमा बर्षा राउतको सल ता ने का छन् । उनले एक गीत छायाँकनका क्रममा यस्तो गरेका हुन् । ‘ए काली भा गौं यसपाली’ भन्ने गीतमा माग्ने बुढा र बर्षा राउतको अभिनय रहेको छ । माग्ने बुढाको जन्मदिनमा प्रिमियर गरिएको उक्त गित ४ दिनमा एक लाख बढिपटक हेरिसकिएको छ । आमा अग्नी कुमारी ल्याएको यो भिडियोमा सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएका छन् ।
‘माग्ने बुढा’ अर्थात केदार घिमिरेसँग के छैन ? खुट्टा तन्काएर आरामसाथ बस्नका लागि काठमाडौंमा तीन तलाको घर छ । निर्धक्क सुबिस्तासँग हिँडडुल गर्न गाडी छ । लोभलाग्दो ख्याती छ । सुखी परिवार छ । सबैथोक छ । हिजो कहाँ त्यस्तो थियो ?
उनीसँग दुःख र अभावको चाङ थियो । सडक पेटीमा टीका, नेलपोलिस, काइँयो बेच्दै हिँड्थे । कलंकीको त्यो सडक पेटी, जहाँ उनी गरिबीसँग साँझ–बिहान कुस्ती खेल्थे । धुलो र धुँवा सहँदै ग्राहक कुर्थे । तर, उनलाई त्यहाँ पनि सुबिस्तासँग गरिखान कसले दिने ?